Home Life Style Agriculture असार सकियो रोपाइँ सकिएन
Friday, 31 July 2009 11:54	ourkirtipur
समय आँखा अगाडिबाट फटाफट भागिरहेछ । नसोचेका घटनाहरु उपहार दिंदै एकनाश मान्छेलाई बूढो बनाइरहेछ। हाम्रो पालामा यस्तो हुन्थ्यो, उस्तो हुन्थ्यो भन्ने अवसर हरेकलाई प्रदान गरिरहेछ । हुनत मेरो उमेरले 'पाको' भन्ने उपाधि पाइसकेको छैन तापनि मैले देख्दा देख्दै पनि कति वर्तमानहरु इतिहास बने, बन्दैछन् । असार महिनाले विदा र्लिको पनि एक हप्ता पुग्न लाग्यो । मध्य–मनसुनको याम हुनुपर्ने हो यी दिनहरु । दिन–रात पानी परेर घरभित्रै थन्किनु पर्ने दिनहरु हुन् यी । केही वर्ष अघि सम्म असार–साउन महिनाको सामान्य वर्णन यसरी नै हुन्थ्यो । आज स्थिति समान रहेन । असार सकियो रोपाइँ सकिएन ।
खेती किसानीमा कहलिएका कीर्तिपुर वासीहरुको मन उदास छ आजकल । टन्टलापुर घाममा बाँझो खेत हेरेर हरेश खाइरहेछन् । उडी आउने हर काला बादलमाथि आशाको त्यान्द्रो सोझ्याउदैछन् । बूढापाकाहरु कलियुग आयो भन्दैछन् । जहाँ खेतीयोग्य जमीन छैन त्यहाँ थेगीनसक्नु वर्षा भइरहेछ । जहाँ धानका ब्याड–ब्याडबाट बीउहरु किसानलाई जिस्काइरहेछन् त्यहाँ पानीको अवशेषसम्म छैन ।
नहुनु मामा भन्दा कानो मामा ठीक भन्नेहरु पनि छन् । फुको माटोमा कुटोले घैया रोपे झैं धान रोप्नेहरु रोपिरहेछन् । धान फल्ने आशाभन्दा पनि रोपाइँ गरियो भन्ने सन्तोष लिनलाई । हुनत यो समस्या देशका धेरै भागमा धेरै जनाले खेपीरहेका छन् । सरकारले हेला गरेका जनतालाई भगवानले पनि हेपिरहेका छन् । यसरी घडेरी पर्ला भन्ने मेरो बाल–मष्टिस्कले कहिले पनि सोच्न सकेको थिएन । आज यो वयस्क मनले मान्न सकिरहेको छैन । किन यस्तो भइरहेछ बुझेको छु तर स्विकार्न तयार भइरहेको छैन ।
प्रकृतिलाई प्रयोग गरेर प्रकृतिलाई विनाश गर्ने भयङ्कर अनुचित कदमहरुको प्रतिफल हो यो । सारा संसारको तापक्रम बढ्दो छ । पोहोर सालभन्दा यसपाला बढी गर्मी, अहिले भन्दा आउने साल बढी गर्मी हुने निश्चित छ । पृथ्वीमा दुइ–ध्रुवमा रहेका भीमकाय हिम–भण्डारहरुको क्षय हुने क्रम शुरु भइसकेको छ । विश्व दिन दुगुणा र रात चौगुणाले विनाश तर्फ धकेलिंदै छ । खण्ड वृष्टि, अतिवृष्टि खडेरी, बाढी पहिरो, सुनामी, भुकम्प अनगिन्ती प्रकोपहरु लामवद्ध भएर बसेका छन् आक्रमणका लागि । मौका पाउनासाथ एकपछि अर्को विनाश शुरु भै हाल्नेछ । तर हामी जागेका छैनौं । जाग्न चाहिरहेका छैनौं ।
वातावरण विनाशको प्रमुख कारक तत्व मानव नै हो । जैविक उर्जा (कोइला, पेट्रोल, मट्टीतेल, डिजेल) आदिको प्रयो बढ्दो छ । र साथै बढ्दैछ विश्वमा प्रदुषण, रोगब्याध र तापक्रम । अझ अति विकसित राष्ट्रले गर्ने प्रदुषणको कस्ले हिसाब राख्ने । ठूलाठूला आणविक भट्टीले बढाइरहेको पातक्रमलाई कस्ले नियन्त्रण गर्ने? छ कुनै निकाय? निष्स कानुन सानालाई लाग्छ, ठूलालाई कहिल्यै लागेको छैन र लाग्दैन पनि ।
समाधानका उपाय नभएका होइनन् । जैविक इन्धनको प्रयोगलाई शतप्रतिशत रोकौं । वातावरणैत्री उर्जा प्रयोग गरौं । पेट्रोलले चल्ने कारलाई सोलारले चलाउँ । दाउरा बाल्नु भन्दा गोवर ग्यास बनाउँ । मोटर साइकललाई भन्दा साइकललाई जोड दियौं । अनावश्यक विद्युत खपत कम गरौं । समग्रमा सचेत बनौं र अरुलाई सचेत बनाऔै । आ–आफ्नो हिसाबले साना प्रयास गरौं । के थाहा "एकले थुकी सुकी हजारले थुकी नदी" भैहाल्छ कि । आउनुहोस् प्रयास गरौं। के थाहा फेरी अर्को वर्षहरुका रोपाइँमा हिलाम्य भएर आलीमा बसेर आलुको अचार र दही च्युरा खान पाइन्छ कि???
कीर्तिपुर – १९, सल्यानथान
Last Updated ( Saturday, 25 September 2010 18:55 )